Mgbanwe ihu igwe nwere ike ibute nnukwu akụnụba na US | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbanwe ihu igwe bụ ọdachi nye ụwa. Ọtụtụ mba nwere ike tufuo akụnụba ha ma ọ bụrụ na nsogbu mgbanwe ihu igwe aga n'ihu. Ọ bụrụ na emeghị ihe iji dozie ya, America ga-efunahụ akụ kachasị ukwuu n'akụkọ ihe mere eme ya niile.
Mmetụta nke mgbanwe ihu igwe nwere ike ịmepụta ọdịiche dị ukwuu n'etiti ịda ogbenye na enweghị nhata n'etiti steeti ndịda na nke ọdịda anyanwụ. Kedu ihe nwere ike ime akụ na ụba America?
Mgbanwe ihu igwe na-eme ka ịda ogbenye
Emeela ọmụmụ ihe na Mahadum California Berkeley na ọnụ ahịa enwere ike inweta site na mgbanwe ihu igwe ma ọ bụrụ na anyị aga n'ihu n'okporo ụzọ dị ugbu a. Onye nyocha ahụ maka ọmụmụ ihe ahụ, Salomon Hsiang, kwuru na ọ bụrụ na anyị aga n'ihu na ọnụọgụ nke ikuku gas, O nwere ike ibute ụzọ kachasị ukwuu akụnụba sitere n'aka ndị ogbenye nye ndị ọgaranya na akụkọ ntolite US niile.. Nyocha ahụ na-eme ka o doo anya na otu ụzọ n'ụzọ atọ kachasị daa ogbenye nwere ike "na-ata ahụhụ mmebi akụ na ụba nke ga-efu 20% nke ego ha nwetara ma ọ bụrụ na okpomoku na-aga n'ihu na-enweghị nsogbu."
Mba ndị dị n'akụkụ ndịda na ala nke Midwest ga-abụ ndị ga-efunahụ ohere kachasị akụ na ụba ka ha na-ada ogbenye ma na-ekpo ọkụ. N'aka nke ọzọ, mba ndị oyi na-atụ na mpaghara ugwu na ugwu Rocky, ga-erite uru site na mgbanwe ihu igwe n'ihi na ha ga-emeziwanye ụgwọ nke ahụike, ọrụ ugbo na ume.
Otu nyocha ahụ gbakọrọ na otu ogo Fahrenheit na ogo ụwa ga-etinye nsogbu na akụ na ụba US ihe mfu efu nke 0,7% nke nnukwu ngwaahịa ya (GDP), ọ bụ ezie na ogo ọ bụla nke ikpo ọkụ ga-efu karịa nke ikpeazụ.
N'ikpeazụ, e mere ụfọdụ amụma ihu igwe maka ọdịnihu nke na-abawanye na oke osimiri na mkpa ịkwaga ebe dị nchebe maka ndị niile bi n'obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Mgbanwe ihu igwe nwere ike ime ka akụnụba buru ibu na US